Ao anatin’i Myanmar: Fijoroana Vavolombelona amin’ny fiavota-tena sy ny fifandanana · Global Voices teny Malagasy
Mponina efatra no nizara ny zava-niainany tamin'ny fanonganam-panjakan'ny miaramila
Voadika ny 10 Jona 2021 9:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Nederlands, English
Fihaonana fanoherana ny fanonganam-panjakana ao Myanmar. Saripika iray nozarain'olompirenena manoratra isan'andro, nahazoana alalana
(Fanazavana mialoha: ny teny “resistance” io nadika hoe “fifandanana” io)
Telo volana taorian'ny nandrombahany fahefana, mbola miatrika hatrany ireo haika tsy manaiky ny maha-fitondrana ara-dalàna azy ao amin'ny firenena ny governemanta miaramilan'i Myanmar. Na dia efa naongana aza ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta voafidy ary nohazonina ireo mpikambana ambony ao amin'ny antoko nitondra teo aloha, dia mbola tsy resin'ny fitondrana miaramila lahatra hanaiky ny fahefany amin'ny fananganana governemanta tetezamita ny ampahany maro dia maro amin'ny mponina.
Tamin'ny 22 avrily, nanomana webinar (fivoriana an'habaka) miresaka ny toe-draharaha ao Myanmar sy filazalazana momba ireo hetsika fifandanana isan-karazany ny Global Voices. Navoitran'ny webinar ireo fijoroana vavolombelona maro avy amin'ireo monina ao Myanmar izany nizara ny fiantraikan'ny fanonganam-panjakana ao amin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo sy ny fomba ifandanan-dry zareo manoloana ny jadona miaramila. Noho ny antony ara-piarovana mivandravandra, nanapa-kevitra izahay ny tsy hanasa azy ireny mandritra ny webinar na hoe hamoaka ny anarany ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Efa hatramin'ny andro voalohany nisian'ny fanonganam-panjakana no nisandratra ny hetsika fifandanana ary mbola mitohy ny fahazoany fanohanana manerana ny firenena na dia mafy dia mafy aza ny tetikady fampihorohoroana ataon'ny miaramila amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, mponina, mpanao gazety ary ireo hafa ahiana ho mirona any amin'ny fanoherana. Mponina iray no nilaza taminay ny halehiben'ny Civil Disobedience Movement na CDM (Hetsika Tsy Fankatoavam-Bahoaka) amin'ny fanomezam-panantenana ho an'ireo te-hamerina amin'ny laoniny ny fitondrana sivily:
Hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana, nahazo fanohanana avy amin'ny vahoaka avy amin'ny karazan'asa be dia be ny hetsika tsy fankatoavam-bahoaka—izay antsoin'ny ankamaroan'ny vahoaka hoe CDM—notarihan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary avy eo narahan'ny mpiasan'ny fiaran-dalamby ao Myanmar. Nangataka tamin'ny miaramila hamerina ny fahefana any amin'ny governemanta voafidim-bahoaka ihany koa ny mpiasan'ny Banky, mpahay lalàna, mpampianatra ary injeniera manerana ny firenena, ary avy eo ry zareo tsy nanaiky ny hiverina hiasa. Maro amin'ireo sivily no manohana ny CDM amin'ny alalan'ny fanomezana na fanangonam-bola hanohanana ara-bola ireo mpandray anjara amin'ny CDM.
Amin'ny maha-olompirenen'i Myanmar ahy, tiako ny manoritra fa izahay vahoakan'i Myanmar dia manohana ny CDM ary mino fa zava-dehibe ny mifandàna amin'ny fitondrana miaramila amin'ny fomba rehetra azo atao, ary ny CDM no marik'izany fifandanana izany.
Ny fijoroana vavolombelona feno dia novakian'i Mohamed ElGohary tonian'ny Global Voices:
Fijoroana vavolombelona iray hafa no milaza ny halozan'ny toe-draharaha ao Yangon, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Nalain'ny jadona miaramila an-keriny i Yangon, renivohitra ara-barotra izay onenako. Ny hitanao dia zazalahy tsy ampy sakafo mitondra basy toa mavesatra noho ry zareo milahatra amin'ny lalana, manohintohina sy mandrahondrahona ireo sivily tsy manantsiny eny amin'ny toeram-pisavana. Navelako any an-trano ny smartfinday rehefa mankany an-tsena aho. Maro aminay no niverina nampiasa finday foza (misy kitendry) mba tsy haninona izahay, sady tsy misy koa ny ilàna smartfinday rehefa tsy misy “data”n-tsela na aterineto vonona. Ambonin'izany rehetra izany, mandeha ihany koa ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ary mitombo isa ny fandehanana-fanafihana olona amin'ny alina. Raha manambahiny ianao dia tsy maintsy soratanao ny anarany (any amin'ny fokontany raha aty amintsika aty Madagasikara). Fa raha tsy manao izany ianao dia ny “mpanome vaovao” no hanao izany asa izany.
Ny fijoroana vavolombelona feno dia novakian'i Veroniki Bacharidi-Krikoni tonian'ny Global Voices :
Mpitsidika iray tafahitsoka tao Myanmar nandritra ny fanonganam-panjakana no namariparitra ny zava-niainany nahita ireo fihetsiketseham-panoherana nahitana vahoaka maro taorian'ny fanonganam-panjakana:
Nanatri-maso vahoaka an'arivony nandeha an-dalambe aho. Isaka ny mandalo ry zareo, dia mitehaka azy avokoa ary manangana ilay rantsatanana telo izay lasa saimbôlin'ny hetsi-panoherana ny mpandalo, ny vahoaka an-tsisin'arabe, ao anatin'ny fiaran-dry zareo, eo ambony môtô, ao am-pivarotany, any an-tranony. Aorian'ny diabe, hanatontosa fandaharana ry zareo izay hiresahan'ny mpikabary ny maha-aradalàna ny foto-keviny sy ny fitakiany. Hiventy hira revolisionera ihany koa ry zareo na ny malaza indrindra dia ny “Kabar Ma Kyae Buu” izay hiraina amin'ny feon-kiran'ny “Dust in the Wind” ary ahitana tononkira manao hoe “tsy ho avelanay heloka ary tsy hohadinoinay mandrakizay ny mpanao didijadona”.
Nanontanian'ny mpitsidika ny mpikatroka hampitaha ny hetsika fanoherana ny fanonganam-panjakana amin'izao fotoana sy ny tolona nanoherana ny jadona miaramila tamin'ny taona 1988 sy 2007:
Avy eo aho nanontany azy ireo ny fahasamihafana amin'ny hetsi-panoherana amin'izao fotoana izao sy ny hetsika 8888 tamin'ny taona 1988 sy ny revolisiona jaky tamin'ny taona 207. Nolazain-dry zareo ahy fa ny fahasamihafana goavana dia, manana ny teknolojia sy ny fifandraisana ry zareo handrindrana ny hetsika ataon-dry zareo sy hilazana amin'izao tontolo izao izay mitranga ao Myanmar amin'izao fotoana izao.
Farany, olom-pirenena iray no nilaza ny fitokiany fa tsy ho afa-mandresy ny hery prô-demaokrasia ao Myanmar ny jadona miaramila:
Misy ny vakisiny amin'ny valan'aretina hiarovan-tena ary azo sitranina ny marary saingy tsy misy ny vakisiny hiarovana ny sivily tsy manam-pitaovam-piadiana amin'ny tifitifitra fahatany, fampijaliana, famerenana vatan'olona mary ny ampitso marainan'ny fisamborana ary ny famoretana an-terisetra avy amin'ny miaramila mpamono olona.
Ny mampihorohoro ny firenenay ihany no vitan'ny miaramila fa tsy ho afa-mitondra ry zareo. Afa-mitifitra, mamono ary misambotra ireo tanora maherifo antsoina hoe “voninkazon-dohataona” ry zareo fa tsy afa-midify ny Lohataonan'i Burma.
Jereo ny webinar feno: